Ngubani uMartin Vrijland futhi kungani abhala izindatshana? UMartin Vrijland yintatheli, umlobi kanye nomcwaningi manje osenewebhusayithi enkulu kunazo zonke eNetherlands yokufuna iqiniso kweqiniso. Ngo-2012 wayeka umsebenzi wakhe njengabaphathi bezentengiselwano bamazwe aphesheya futhi wanquma ukwenza umsindo ohlukile. Lapho […]
Umbono omusha futhi ocacile!
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-6 Julayi 2020	• 0 Amazwana
Kulabo abasacabanga ukuthi inhlangano iBlack Lives Matter yaba nemvuselelo yesikhashana ngenxa yokubulawa kukaGeorge Floyd kanye nemibhikisho eyenzeka emhlabeni wonke eyibanga, kungakuhle ukubuka izithombe ezingezansi. Lokho kwakungoSuku lweNkululeko, ngoJulayi 4. Ngaleso sikhathi, intombazane eneminyaka eyisishiyagalombili enomnyama […]
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-2 Julayi 2020	• 6 Amazwana
Uma sibheka imibiko yamazwe omhlaba, kubonakala sengathi igagasi lesibili le-coronavirus selisendleleni. Ukuthi lokho empeleni kungukugagasi lwe-coronavirus noma igagasi lezinombolo nezithombe zesitayela sabezindaba zeHollywood zama-ICs agcwele kusengumbuzo. Umbuzo wokuthi i-covid-19 coronavirus isakazeka kanjani […]
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-30 Juni 2020	• 4 Amazwana
Muva nje bengisebenza kanzima encwadini entsha enesihloko esithi 'Coronavirus covid-19 kugcina kuphi lokhu?' Ukuqubuka kwe-coronavirus covid-19 kwakuyibhubhane eyabikezelwa eyagcwaliseka, njengoba kwenzeka nokwethulwa kwezinsizakusebenza kwezobuchwepheshe engangikulindele. Incwadi ichaza ngokuningiliziwe ukuthi yimuphi umbhalo weskripthi owenzekayo futhi ngikwenza kanjani lokhu […]
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-29 Juni 2020	• 1 Comment
Isitebhisi sePenrose siyinkohliso ebonakalayo noma into engenakwenzeka eyasungulwa yisazi sezibalo nesazi semvelo saseBrithani uRoger Penrose ngonyaka we-1958. Isitebhisi esifanayo sasikhulelwa ngumculi waseSweden u-Oscar Reutersvärd, kodwa sasingaziwa ngaphandle kweSweden. Ezitebhisini kubonakala sengathi kungenzeka ukuthi ukwazi ukukhuphuka (noma phansi) ukubuyela esitebhisini esifanayo. Ku […]
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-26 Juni 2020	• 20 Amazwana
"Uthando, ukubekezela nokuzethemba". Bengineminyaka eli-10 ubudala lapho ngiqala ukuthanda iBandla futhi ngiqonda ukuthi uzothandwa uma nje ungaphendukela eNkosini. Lapho nginquma ukungavumi, uthando lwaphenduka ngokushesha ekujezisweni. Isidlakudla esifanayo engi […]
Ngabe yini imigomo ye-Black Lives Matter, i-LGBTI kanye neye-Covid-19 yokugoma efanayo?
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-24 Juni 2020	• 6 Amazwana
Ngabe yini imigomo ye-Black Lives Matter, i-LGBTI kanye neye-Covid-19 yokugoma efanayo? Ekugcineni imayelana noguquko lwabantu lube ngabantu abangathathi hlangothi ngokobulili, abanemibala egqamile, nabaguqukayo. Ake ngichaze. Bopha izihlalo zakho zokuhlala! Ngokwazi kwami, kuyacaca impela ukuthi imigqa emhlophe engabandlululi inomthwalo weminyaka wokucindezelwa kwe […]
Ukuboniswa kukaJuni 21, uWillem Engel, uMordechay Kris ubuhlungu, uJeroben Pols, ubuhlanya begciwane futhi kuzokwenzekani ngokulandelayo?
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-23 Juni 2020	• 17 Amazwana
Izolo ngikuchaze kafushane ukukhonjiswa kweSonto 21 Juni kuJune The Hague. Kungenzeka ukuthi uke wabona izithombe lapha nalaphaya futhi kungenzeka ukuthi uthole ukuthi zonke “zazihlelekile” kahle kakhulu. Uthole nokuthi ababhikishi baphume emavinkilini ngamaphoyisa. Kungashiwo ukuthi […]
I-Demonstration I-Huse fuse ekahle ku-powder keg nokusika okufushane ukuvimba ukuqopha amaphoyisa
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-22 Juni 2020	• 10 Amazwana
Ngezinsuku zokusakazwa ngamavidiyo we-Facebook ne-YouTube ne-bandwidth ephezulu nge-5G, manje usungahamba bukhoma embukisweni onjengowayizolo e-The Hague futhi usakaze futhi uqophe konke. Bekunabavukeli abadingekayo kanti inyunyana yamaphoyisa manje isisetshenziselwa ukubeka amaphoyisa engcupheni yokuhlaselwa. […]
UMartin Vrijland emuva kusuka isikhathi sokuphumula, ukuthutha nokuhlaselwa kwe-DDoS: sizoqhubeka!
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-22 Juni 2020	• 5 Amazwana
Sengikukhulume ngayo eposini le-Facebook ngeledlule. Bengidinga ikhefu. Ukubhala cishe okungayeki kusukela ngoNovemba 2017 kanye nezinguquko ezidingekayo, kanye nemicimbi enobudlova yezikhathi zamva nje kwabangela usizi. Kwesinye isikhathi udinga isikhathi sokubamba umoya wakho. Ngaphezu kwalokho, bekufanele […]
Ngabe uhlelo luyoziwela ngokwalo, noma ngabe singenzi lutho?
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-9 Juni 2020	• 26 Amazwana
Wonke umuntu angakwazi ukubona umbhalo we-master manje owenzekayo ngejubane elikhulu. Izidumbu eziphila ngaphandle kukaSmith njengoHenry Kissenger nezinye izandla ezindala kwezepolitiki kusabonakala ukuthi zinendaba nempumelelo yeNew World Order futhi zisakhuluma ngaphandle, ngisho nangomlenze owodwa ethuneni. […]
Ukuvakasha okuphelele: 4.170.631